Lego Star Wars Dartဇ Vader တရားထိုင်ခြင်းအပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
27 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 ရော့ Paton 494 Views စာ0မှတ်ချက် 18 +, 75183: Dartဇ Vader ပြောင်းလဲခြင်း, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း, ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter, Dartဇ Vader, အထွေထွေ Veers, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, reviews, Star Wars, Star Warsဖြေ - အင်ပါယာကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်, အင်ပါယာသို့ပြန်သွားရန်ကိုရို, အဆိုပါ LEGO Group
75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Lego Star Wars ၎င်းသည်မူရင်း trilogy မှအသစ်တစ်ခုခုကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်ပြီး၎င်းကိုကောင်းစွာပြုလုပ်သည်။
ပထမတစ်ချက်မှာ၎င်းသည် extension တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် Lego Star Wars Helmet စုဆောင်းခြင်း (သို့) တစ်ခုပင် လူကြီးများအတွက် Lego သတ်မှတ် သို့သော်သင်အမျိုးအစားခွဲခြား 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ၌တစ်ယောက်တည်းရပ်နေသည် Lego Star Wars catalog သည်မူလ trilogy မှစစ်မှန်သောအသစ်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု display အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒါကတစ်ခုခုပြောနေတယ်။
theme: Lego Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 59.99 / $ 69.99 / € 69.99 အပိုင်းပိုင်း: 663 အသေးစားပုံများ: 2
၆၆၃ ကျပ်နှင့် minifigures နှစ်ခုအတွက်ပေါင် ၇၀ 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း pricier တစ်ယောက်အနေနဲ့သေချာပေါက်ကြုံရမှာပါ Lego Star Wars လောလောဆယ်ရနိုင်သော set များ အတော်လေးပြောရလျှင်၎င်းသည်နှောင်းပိုင်းအခြားထင်ရှားသောဖြန့်ချိမှုများနှင့်သိပ်မနှိုင်းယှဉ်ပါ၊ ပေါင် ၃၀ ပိုရနိုင်သည် 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း (ပြန်လည်သုံးသပ်) မင်းကို Bad Batch အဖွဲ့ဝင်များနှင့်သူတို့၏သင်္ဘောကိုပေးသည်၊ £ ၁၀ အောက်သာသင်ရနိုင်သည် ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter (ပြန်လည်သုံးသပ်) ထူးခြားဆန်းသစ်မှုသုံးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသည်။Lego-Star-Wars ဇာတ်ကောင်များကို minifigure ပုံစံနှင့်£ 15 အောက်၌သင်အတော်လေးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းဖြင့်ရနိုင်သည်။ 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship (ပြန်လည်သုံးသပ်အလွန်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော Boba အပါအ ၀ င် minifigures နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
သို့သော် - တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ခြင်းဖြစ်လင့်ကစား Lego Star Wars မထုတ်ဝေမီပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မသတ်မှတ်ပါ။ 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင်ပထမ ဦး ဆုံးရောင်းထွက်ခဲ့သည်၊ ထိုအစုသုံးစုမတိုင်မီ၊ ၎င်းနောက်နှစ်ခုသည်၎င်းနောက်မကြာမီမကြာမီကုန်သွားခဲ့သည်။ စက္ကူပေါ်တွင်အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးပုံရသော်လည်း၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေးသိသာထူးခြားသောအရာတစ်ခုရှိသည် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်းနှစ်သက်စရာကောင်းတာက၎င်းကိုဘာသာပြန်တယ် Lego သင်အမှန်တကယ်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ပျော်ရွှင်ရန်သတ်မှတ်ပါ
နိဒါန်းမှာပါတဲ့အတိုင်းဘာသာပြန်ဆိုသည် Lego Star Warsတတိယဆယ်စုနှစ် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း မူလ trilogy မှတည်ဆောက်ရန်အသစ်တစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်းရန်သိသိသာသာစီမံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဇာတ်လမ်းပညာအရငြင်းခုံရန်အနည်းငယ်သာရည်ရွယ်ချက်ရှိသော်လည်းရှုပ်ထွေး။ ရွေ့လျားနေသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်arth Vader ၏စရိုက်လက္ခဏာ (ဤသည်မှာငါတို့၏ပထမဆုံး၊ သူ၏အမာရွတ်များကိုဆိုးဝါးစွာမြင်နိုင်သောအရာ) နှင့်လုံးဝ (လူမှုရေးအရဝေးကွာနေသောအင်အားကိုဆို့ခြင်း) နှင့်ဆက်တင်တစ်ခုအဖြစ်အမှတ်ရစေသည်။
Vader အားအထူးသဖြင့်ချည်နှောင်ထားသောဤသူသည် Sith စစ်သည်တော်ကဲ့သို့သူ့အားစာလုံးနှင့်ပုံဆောင်သဘောအရခွဲထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ သူ၏ကျော်ကြားမှုနှင့်အရေအတွက်သည်အမှန်ဖြစ်သည် Lego Star Wars နှစ်တွေတစ်လျှောက်သူ့ကိုထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်တာဒါကဒါကသူ့ရဲ့တရားထိုင်တဲ့အခန်းထဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထည့်ခံရတာတော်တော်အံ့သြဖို့ကောင်းတယ် Lego ပုံစံ။
သို့ဖြစ်ရာတည်ဆောက်ပုံစံနှုန်းများနှင့်နည်းစနစ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် Lego Star Wars ၂၀၂၁ တွင်ကမ်းလှမ်းချက်များ 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း setting ၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်နောက်ကွယ်မှလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့အကြားတောက်ပသောချိန်ခွင်ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းထက်ပိုပေးသည်။ ဒါကအလွန်သေးငယ်တဲ့စကေးကိုထိန်းရန်စီမံနေစဉ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအကွေးများနှင့်အလှည့်အပြောင်းများစွာကိုဖမ်းယူနိုင်သောစိတ်ဝင်စားစရာ၊ ဂျီ ometric မေတြီပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ The Empire Strikes Back တွင်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုထင်ဟပ်စေပြီး၊ အပေါ်ပိုင်းကိုအပေါ်အောက်မြှင့်တင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
အလုံးစုံဒီဇိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသဘောပေါက်သည် Lego ၎င်းကိုတည်ဆောက်သည်ထက်များစွာပိုစတိုင်ကျသည်။ ပုံစံကိုအခြေခံမှအတူတကွပေါင်းစည်းပုံမှာအတွေ့အကြုံရှိ fan builder တစ် ဦး သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးစိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှုကိုပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲကြမ်းပြင်ကိုကြွေပြားများနှင့်ကြမ်းပြင်ကိုချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။xtra ပြီးဆုံးခြင်းအဆင့် ၎င်းသည်တောက်ပသောအနက်ရောင်ကြမ်းပြင်များပါ ၀ င်သည်၊ သို့သော်အရာ ၀ တ္ထုကိုပြန်လည်ဖန်တီးထားသောပတ်ဝန်းကျင်၏အလုံးစုံအလှကိုအထောက်အကူပြုသည်။ Lego Star Wars အစုံ၊ အဲဒါတွေကအမည်းရောင်ပန်းကန်ပြားကြီးတွေလောက်ပဲကျန်ခဲ့မှာလားဆိုတာမင်းအံ့သြလို့မရဘူး။
တည်ဆောက်မှု၏အသေးစိတ်အဆင့်နှင့်ဇိမ်ခံအဆင့်များရှိသော်လည်းလက်တွေ့တွင်အသုံးမ ၀ င်ပါ၊ အခန်းတစ်ခန်းကိုအဆင့်သုံးဆင့်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်ပြီးအောက်ခြေ display မျက်နှာပြင်သို့အမှန်တကယ်သော့ခတ်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းကိုခြုံငုံကြည့်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ။
ထိုနည်းတူ၊ အောက်ပိုင်းနှင့်အပေါ်ပိုင်းတစ်ခြမ်းကိုအခန်းသို့အခန်းထဲသို့မြှင့်တင်ရန်ယန္တရား၏ဒီဇိုင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လျော့ပါးနေပုံရသော်လည်း၎င်းကိုနားလည်လိုစိတ်ပြင်းပြသည်။ Lego system သည်၎င်းထက်ပိုပျော်စရာကောင်းပြီးထူးခြားသောကစားနိုင်သည့်အရာကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်၊ ဤပုံစံအမျိုးမျိုးဖြတ်သန်းသွားသောထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များကိုအနည်းငယ်ထိုးထွင်းမှုအဖြစ်၊ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်စကားပြောဆိုမှုကိုလစ်လျှူရှုခဲ့သည်။ Brick Fanatics သူတို့ကဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဘေးဘက်ကိုလှည့်မယ့်ယန္တရားရဲ့ဗားရှင်းတစ်ခုကိုသူတို့လုပ်နေခဲ့တာဘဲ၊ ရုပ်ရှင်ရဲ့တိကျမှုအပေါ်အောက်ရွေ့လျားမှုနဲ့သာတွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အခန်းတွင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဒီဇိုင်းသည်အဖွဲ့သည်အတွင်းပိုင်း၏တောက်ပသောအဖြူရောင်နှင့်အပြင်ဘက်ဂျက်ရောင်အနက်ရောင်တို့အကြားသိသိသာသာကွာခြားချက်ကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်ကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပေ။ မရ။ ၎င်းသည်သေးငယ်သည့်အရာသာဖြစ်သော်လည်းစစ်မှန်သောအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းသည်city ၎င်းအရာများအားရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်အသေးစိတ်ကိုအာရုံစိုက်ပါ Lego set သည်အခြားနည်းဖြင့်လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ပြောရမည်ဆိုလျှင်အလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုတစ်ခုမှာထိုထောင့်ချိုးနံရံများသည်သူတို့ပြောင်းသည့်နေရာ၌အတော်လေးကွာဟချက်များထားခဲ့ပုံဖြစ်သည်။ စကြဝာအတွင်းရှိအခန်းကိုအပြည့်အဝပိတ်ထားသောနေရာတွင် Lego မင်းကအမှောင်သခင်နဲ့မရေမရာမျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ချန်ထားခဲ့ပါ၊ သူကငါ့ကိုမြင်သလား။ သူအခုငါ့ကိုကြည့်နေတာလား။ သူငါ့ကိုအခုမှသေချာမြင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါထားခဲ့သင့်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီဇိုင်းကိုစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီရင်အတတ်နိုင်ဆုံးသေးငယ်တဲ့စကေးနဲ့အနီးဆုံးကိုရောက်အောင်သွားပါ။ p အတွင်းမှာarts ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည် Lego Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၊ ဤအရာသည်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်သည်။ သူတို့ကအပိုင်းသစ်တစ်ခုကိုပုံသွင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကုမ္ပဏီရဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပြီးသုံးလို့ရမယ့်အပိုင်းမဟုတ်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကပိုကြီးတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့အပြည့်ပိတ်လို့ရတဲ့အခန်းကိုတည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘတ်ဂျက်ကိုတိုးစေလိမ့်မယ်။ ဇာတ်ကောင်များအနေနှင့်အခန်းပတ် ၀ န်းကျင်၌သူတို့၏အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုသည် p ဖြစ်သည့်အခါမလိုအပ်သော minifigures တစ်စုံနှင့်မင်းကိုထားခဲ့ပါart setting တစ်ခုအနေနဲ့အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစေတဲ့အရာ
ကံမကောင်းစွာဘဲဖြစ်နေရင်နားလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါတောင်မှဒီပြကွက်ကိုပြတဲ့အခါအများစုကသူ့ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လာမယ့်အနက်ရောင်စတုရန်းအခြေခံပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယိုင်နဲ့နေတာဟာအဲဒါကိုဖွင့်ထားဖို့ဘဲ။ ၎င်းသည်) အနည်းဆုံးတော့၎င်းကိုအလွယ်တကူလစ်လျူရှုနိုင်သည်။
ပိုသေးငယ်တဲ့ပြသနာတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်ဖော်ပြဖို့လိုတာတစ်ခုကရုပ်ရှင်ထဲမှာလိုပဲ Vader ရဲ့ ဦး ထုပ်ကိုဆုပ်ကိုင်ဖို့၊ အခန်းရဲ့အပေါ်ဆုံးတစ်ခြမ်းမှာစံပြမရှိခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ၂၀၁၇ ရဲ့ ၇၅၁၈၃ D အတိုင်းပါပဲ။arth Vader Transformation သည်အလားတူပုံစံမျိုးဖြင့်ပြောင်ပြောင်တောက်ပြောင်အောင်မြင်ရန်စီမံသည်။
ထိုပြသနာများကိုချန်ထားခဲ့ပါကအခန်း၏နောက်ဘက်၌တည်ဆောက်ထားပြီးတွဲထားသည့်ဖန်သားပြင်နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ကိုယူလာသည်။ ဒါဟာအပိုဆုအီးပါxtra part ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းအား Vader ၏အထင်ရှားဆုံးသရုပ်ပြမှုများအနက်မှတစ်ခုအားပြန်လည်ဖန်တီးရန်ကူညီသည်၊ သူသည် Admiral Ozzel ကိုကန့်လန့် ဖြတ်၍ Captain Piett အားဘေးမှကြည့်နေသည်။ ထိုဇာတ်လမ်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုထည့်သွင်းသည် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း မမျှော်လင့်ဘဲတောက်ပစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အစုံကိုတကယ်ပြီးမြောက်စေသည်။
75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း အက္ခရာနှစ်လုံးပါလာသည် - Darth Vader နှင့် General Veers၊ မော်ဒယ် Admiral Ozzel နှင့် Captain Piett တို့သည်ပုံစံ၏နောက်ကျောတွင်တည်ဆောက်ထားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကိုယ်စားပြုသည်။
Darth Vader သည်ပုံနှိပ်ထားသောလက်နက်များနှင့်ဓာတ်ဖျင်ခေါင်းစွပ်တို့ပါ ၀ င်သည် ၇၅၂၉၄ Bespin Duel (သူသည်ပုံနှိပ်ထားသောလက်နက်များနှင့်လာသော်လည်းနူးညံ့သော spongey cape ပါလာသည် 75291 မရဏစတားနောက်ဆုံး Duel) ့။ ပုံနှိပ်ထားသောလက်နက်များသည် minifigure ဒီဇိုင်းအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်artသူသည်ရှေ့တွင်ထိုင်။ အလယ်၌ထိုလက်နက်များကိုသူ့ရှေ့တွင်ဆန့်ထုတ်ထားသည့်ဤအစုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သည်။
၂၀၁၇ ရဲ့ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်ကွပ်မျက်ခံရတဲ့ ၇၅၁၈၃ D နဲ့တူတယ်arth Vader အသွင်ပြောင်းခြင်း၊ 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ဦး ထုပ်မပါဘဲ Vader ရှိရန်လည်း၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာတစ်ခုလည်းရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူ၏ ဦး ခေါင်းပုံနှိပ်ခြင်း၊ ရှေ့နှင့်နောက်ကျောဒီဇိုင်းကိုအမြဲတန်ဖိုးထားမှုရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
General Veers သည်နှစ်တိုတစ်လျှောက် minifigure ပုံစံဖြင့်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင်မကြာသေးမီကအတိုင်းသာဖြစ်သည် 75288 ကို AT-ATမရ။ သို့သော်၎င်းသည်ဗားရှင်းတွင်ပါ ၀ င်သည် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း သူ၏ပုံမှန် Imperial ၀ တ်စုံတွင်ပထမဆုံးဖြစ်ပြီးအခြားသူများအားလုံးသည်သူ၏ Hoth သံချပ်ကာအသွင်အပြင်ကိုအခြေခံထားသည်။ နယ်ချဲ့စစ်တပ်တည်ဆောက်လိုသူများအတွက်ဤအရာသည်လက်လွတ်မခံသင့်သောအရာဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာအစုံ၏ဇိမ်ခံသဘောသဘာဝအရသူသည်အနက်ရောင်ဘွတ်ဖိနပ်များနှင့်ပုံစံခွက်နှစ်ခုပါလာသည်။
စျေးနှုန်းသည်ပြသနာမရှိပုံရသည် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ၎င်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နွေရာသီတွင်ဖြန့်ချိသောလှိုင်းများပထမ ဦး ဆုံးရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့် display အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိနေပေမယ့်လည်းဒီ့အတွက်အနည်းငယ်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ minifigures တွေ၊ ဒီဇိုင်းမှာသေးငယ်တဲ့မစုံလင်မှုတွေကဒီ pricier £ 59.99 / $ 69.99 / € 69.99 မှာနှစ်သက်စေတဲ့ set တစ်ခုပါ။ အစုံအတွက်အသစ်အဆန်းအချက်တစ်ခုရှိတယ်၊ ၎င်းရဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်ရိုးရှင်းထက်မြက်မှုကကုန်ကျစရိတ်ကိုအမှန်တကယ်ကူညီပေးသည်။
75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ၂၀၂၁ နွေရာသီသည်တကယ့်ကိုထူးခြားသောပြေးပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပသည် Lego Star Wars အစုံမပါ ၀ င်မီမူရင်း trilogy မှတစ်စုံတစ်ခုကိုရယူသည် Lego ပျော်ရွှင်စရာ၊ လိမ္မာပါးနပ်မှုနှင့်အမြင်အာရုံစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံစံတို့ဖြင့်၎င်း၏ဂုဏ်ကျက်သရေအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါ။
display အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ဤ set သည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအရွယ်အစား၌ရှိပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ Lego D ကိုလှည့်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောရှုထောင့်များကိုအံ့သြစရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါarth Vader သည်သူ၏ထိုင်ခုံ၌ဓာတ်လှေကားနှင့်အခန်း၏ထိပ်တစ်ဝက်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မှတ်သားလောက်တဲ့ set အမျိုးအစားတစ်ခုပဲ၊ ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကနေဒါကိုငါတို့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Lego မည်သည့်အချိန်မဆိုမကြာမီထပ်မံဖွဲ့စည်းပါ၊ ၎င်းသည်မည်သို့နည်းartအခြားမြင်ကွင်းသေးသေးလေးများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာကိုတူအောင်ဘာသာပြန်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ကူးယဉ်နေသည် Lego Star Wars အပိုင်းပိုင်းပြသပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော Carbon Freezing Chamber အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းကိုအခြားမည်သူမဆိုမြင်ပါသလား။
သငျသညျထိုအလုပျကိုတိုက်ရိုက်ထောကျပံ့နိုငျသညျ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Star Wars ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Star Wars 75296: Dartဇ Vader တရားထိုင်ခြင်းအခန်း?
75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ၎င်းသည်ထင်သည်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်ပြီးတည်ဆောက်ရန်သင်၏အချိန်ကောင်းနာရီလိုအပ်လိမ့်မည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Star Wars 75296: Dartဇ Vader တရားထိုင်ခြင်းအခန်း?
အပိုင်း ၅၉၃ ခုပါ ၀ င်သည် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်းminifigures နှစ်ခုအပြင်၊ Dartပုံနှိပ်ထားသောလက်နက်များနှင့် Imperial အရာရှိမိတ်ဆုံ၌ General Veers နှင့် h Vader
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Star Wars 75296: Dartဇ Vader တရားထိုင်ခြင်းအခန်း?
75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း အခန်းကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအမြင့် ၂၀ စင်တီမီတာ ရှိ၍ ၁၈ စင်တီမီတာပတ်လည်ခန့်ရှိသောအခြေခံပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Star Wars 75296: Dartဇ Vader တရားထိုင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်
75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ဗြိတိန်တွင်ယူရို ၅၉.၉၉၊ အမေရိကန်တွင် ၆၉.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ဥရောပတွင် ၆၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချသည်။
← ကြီးမားသော Lego Star Wars, နည်းပညာနှင့် Creator Expert Zavvi တွင်လျှော့စျေး
Lego အပေါ်£ 130 သိမ်းဆည်းပါ Star Wars Zavvi နှင့်အတူထောင်စုနှစ် ၇၅၁၉၂ Falcon →